मेरो लागि पनि त्यो दिन जीवनको अविस्मरणीय दिन बन्यो । वैशाख बिहेको महिना हो । मेरो बिहे १५ गते थियो । धादिङस्थित घरबाटै बिहे गर्ने भनेर बिहेको लागि धमाधम तयारी हुँदै थियो । निम्तो बाँड्ने काम सकिएको थियो । खानेकुरा बनाउनको लागि धेरै मानिसको आवश्यकता पर्ने भएकाले १२ गते शनिबार विदाको दिन बनाउने भनेर काठमाडौँबाट आफन्त आउनु भएको थियो । सबै काम एकै दिनमा सकिने भयो भनेर हामी खुसी थियौं ।
केही खानेकुरा ११ बजे बनाएर सकियो । ड्याडी र दाई अन्य सामान लिन बजार जानु भएको थियो । दिनभरी सबैको फुर्सद भएकाले खाना खाएर बाँकी काम गर्ने भनेर ममीले खानाको तयारी गर्नुभयो । खाना खान सबैलाई बोलाउन मात्र मैले के लागेकी थिएँ अचानक घर हल्लिए जस्तो डङ्ग आवाज आयो । सबैजना ‘भुकम्प गयो, बाहिर आओ ! ’ भनेर कराउन थाले । चारहात खुट्टा टेकेर बल्लबल्ल बाहिर घिस्रदै घरभन्दा माथि बारीेमा पुग्यौँ । निस्कियौं । अनि बस्यौं बारीको पाटामा गएर । जहाँ खुला छ ।
वारिपारिका घर जमिनमा जोतिए । धूलो उड्यो । सबैतिर मानिसको कोलाहल र रुवाबासी सुनियो । हामी पनि हामी होसमा थिएनौं नि ! ड्याडी काठमाडौँ सामान किन्न, भाई र बहिनी पनि काठमाडौँ, दिदी र एउटी बहिनी विदेश, म र ममीमात्र थियौं । हामी ७ जनाको परिवार ४ ठाउँमा थियौँ । १५ गतेको बिहे, १२ गतेको भूकम्प सामानहरू सबै लथालिङ्ग । गाउँ सबै रुवाबासीमा डुब्यो । वारिपारिका गाउँमा मान्छेहरू भूकम्पमा पुरिए । निकाल्न सकिएन भनेर कराउँदै हाम्रो गाउँतिर आएका थिए मान्छेहरू । हाम्रो रोड नजिकैको घर पुरै भाडामा दिएका थियौं । सबैजना बाहिर निस्किन सफल भएछन् तर रोल्पाको एक जना ९२ वर्षको बुवा घरभित्रै पुरिएछन् । निकाल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । भूकम्प गएको २ घण्टामा ड्याडी हस्याङ्फस्याङ् गर्दै ‘के भो के भो’ भन्दै आउनुभयो । भाई, बहिनी ठीक छन्, विदेशमा हुनेहरू ठिकै होलान् भन्नुभयो । मेरो मन थिर हुन सकेन । बिहे गरेर जाने घर पट्टि के भयो होला ? एक छिन अगाडि ज्ञानेश्वर दिदीको घरमा निम्तो दिन जान लागेको भनेर मेरो हुनेवाला स्वामीको फोन आएको थियो । हुनेवाला स्वामीको सम्झना नआउने त कुरै भएन । जिन्दगी विताउने मान्छेको सम्झनात उसै आउने रहेछ । उँहा कता हुनुहुन्छ होला भनेर पेट पोल्न थाल्यो । फोन कहीँ कतै लागेन । बनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले मलाई खाएको थियो । एक किसिमको नरमाइलो लाग्यो । मोबाइलमा चार्ज सकिन आँटेको थियो । तै पनि फोन लाग्छ कि भनेर धेरैपटक कल गर्ने कोसिस् गरेँ, तर फोन लागेन । धैर्य गरेर बस्ने बाहेक अरू विकल्प रहेन ।
माहोल अलि शान्त भयो । भाउजु, काकीहरूले ‘यस्को घरपट्टि के भयो होला, केटो कता होला’ भनेर मेरो बारेमा कुरा गरेको सुने । कोहि जिस्किएर ‘यस्को बिहेले त भैँचालो नै ल्यायो’ भनेर हाँस्दै थिए । आफ्नो भने भित्रभित्रै आगोले पोले जसरी मन पोलिरहेको थियो । खाना पनि खान पाइएको थिइन । भोकले पनि धैर्यको बाँध टुटाउन लागेको थियो । बल्ल ५ बजे फोन आयो, म ठीक छु, तिमीलाई कस्तोे छ ? त्यहाँ कसैलाई केहि त भएको छैन नि ? भनेर हुनेवाला स्वामीले सोधिरहँदा मेरो खुसीको सीमा नै भएन । म त्यसै फुरूङ्ग भयो । केहीहदसम्म भया हट्यो । अघिसम्म भोक र चिन्ताले आत्तिएको म अब ७ दिन पनि नखाइ बस्न सक्छु जस्तो लागेको थियो । सबैतिर आफन्तहरू सकुसल रहेको र मामाघरमा हजुरआमालाई पुरिएको ठाउँबाट निकाले पनि सकुसल नै हुनुहुन्छ, खुट्टा चाँही भाँचिएको जस्तो छ भन्ने सूचनाले सबैको मन अमिलो भयो ।
साँझ प¥यो । बस्नकै पिरलो भयो । भूकम्पको ज्ञासदी उत्तिकै थियो । कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने भनेर सबैजना अ आफ्नो झिक्न मिल्ने घरबाट पाल ल्याउन थाले । एकै छिनमा बारीमा पाल टाँगियो । बिहान खान नभ्याएको खाना बाहिर निकालेर वरिपरिकासहित पुग्ने जति सबैले बाँडेर खायौं । सबैजना सुत्ने तर्खरमा पालभित्र बसेका थिए । लगभग १२ घरका मानिस एउटै पालमुनि थियौं । कोचकाच गरेर सबै सुत्न लागेका थियौं । कहिल्यै नपरेको जस्तो मुसल्धारे पानी र बतास एकै पटक आयो । छेऊ छाउमा भएकाहरू भिज्ने अवस्था भएपछि हामी उभिएर कसैले हावाबाट पाल बचाउन बाँध्न थाल्यौं । कसैले पानी पालभित्र पस्छ भनेर वरिपरि कुलो जस्तो बनाएर पानी तर्काउन थाले । म लगायत धेरैको हावाले पाल उडाउँछ भनेर रातभरी पाल समाएर उभिंदैमा उज्यालो भयो । कहिल्यै भोग्न नपरेको दुःख भोगियो भूकम्पमा । हामी त एउटा प्रतिनिभि पीडित थियौं ।
१५ गते बिहे नहुने भयो । आँटिसकेको बिहे गरिहाल्नपर्छ भनेर २२ गते नौबिसेको महादेव मन्दिरबाट बिहे गर्ने निधो गरियो । छापिएका कार्ड, बाँडिएका निम्तो, पकाउन लागिएका सामान सबै अर्थविहिन भए । सबैतिर सोकले डुबेको अवस्था थियो । तामझाम गर्ने कुरा पनि भएन । नैतिकताले पनि दिन्न । यसो उसो गर्दागर्दै बिहेको दिन आइसकेछ । मनमा खुसी पनि छाएको छैन् । दुःख पनि भएको छैन् झैँ भएको थियो । हजारौँ मानिसको भिडमा आफू जन्मिएको घरबाट अन्मिने मेरो दिन जम्मा जम्मी ५० जनाको मानिसको समुहबाट मन्दिरको आँगनबाट अन्मिन पर्ने दिनमा परिणत भयो । अन्मिएर भूकम्पको कम्पनसँगै म नुवाकोटको कर्म थलोमा पुगें । आफ्नो भागमा भएकोभन्दा बढि खान पाइँदैन भन्ने बुढाबुढीको भनाई मलाई सत्य जस्तै लाग्छ । यसरी मेरो २०७२ सालको बैशाख महिना बित्यो ।
धेरैले अभिभावक गुमाए । छोराछोरी गुमाए । अङ्गभङ्ग भए । धेरैको त्यो महिना दुखै दुःखले बित्यो । तीनवर्ष बितिसक्दा पनि आदिभन्दा बढि परिवार टहरामै बस्न बाध्य छन् । सरकाले दिने भनेको तीन लाखले घर बन्ने अवस्था छैन् । त्यो पनि पटकपटक लिन जानुपर्ने नियमले धेरै जसो गरिब परिवार आश मारेर टहरामै बस्न बाध्य छन् । कहिले फिर्रा र खै भूकम्प पीडितका दिन ?
प्रकाशित १३ बैशाख २0७५ , बिहिबार | 2018-04-26 03:11:21